नारायणहिटीमा बतासले बनाएको अवैध संरचना घन ठोकेर भत्काइँदै Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
नारायणहिटीमा बतासले बनाएको अवैध संरचना घन ठोकेर भत्काइँदै
काठमाडौँ : नारायणहिटी दरबार संग्राहलय परिसरमा बतास समुहले बनाएको संरचना भत्काउन थालिएको छ। बतास अर्गनाइजेशनले सम्झौता विपरीत बनाएको रेस्टुरेन्ट बाहेकको संरचना भत्काउन थालेको हो।
नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्टको अवैध संरचना बनाएको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले समिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरेपछि बतासले समुह संरचना भत्काउन बाध्य भएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा उपसचिव टेकनारायण पौडेल, लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ।
समितिले तीन दिन भित्र अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्ने समय पाएको छ। समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नु अगाडी शुक्रबार नै बतासले संरचना घन ठोकेर भत्काउँदा नारायणहिटी संग्राहलय विकास समिति भने मौन बसेको छ।
सम्झौताबारे समितिका प्रमुख भेषनारायण दाहाल, तत्कालीन पर्यटन सचिव यादव कोइराला र तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ।
बतासलाई नारायणहिटीमा प्रवेश गर्ने बाटो योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा खोलिदिएका हुन्। बताससँग सम्झौता हुँदा मन्त्रालयमा यादव कोइराला सचिव थिए।
भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा उनले नारायणहिटीभित्रको लमजुङ कक्षलाई ड्रिङ्क र डिनरसहितको पार्टी गर्न मिल्ने गरी संरचना परिवर्तन गराउने तयारी गरेका थिए।
पोखराका आनन्द बतास तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी हुँदा पर्यटनसँग जोडिँदै होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा जोडिएका हुन्। अटो व्यवसायमा समेत संलग्न उनी पाटन क्षेत्र हुँदै पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश गरे।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको मृत्यु भएपछि भट्टराई पर्यटन मन्त्री बने पनि उनलाई कुनै प्रभाव परेको थिएन।
बतासबारे उकेराको सामाग्री
पशुपतिको धर्मशालालाई होटल बनाएको विवादित बतास समूहलाई योगेश भट्टराईले नारायणहिटी छिराए, सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट खुल्दै
यति समूहको पथ पच्छ्याउँदै बतास समूह : जहाँ-जहाँ एमाले नेतृत्व त्यहीँ बतासको प्रभाव
बतासको अवैध उडानमा पर्यटन मन्त्रालयको लगाम ,निर्माण रोक्न पत्राचार
बतास समूहको बदनामी पहिल्याउन छानबिन समिति गठन
आरजुले ढाँटिन् कि बतासले किर्ते गर्‍यो ?
सरकारी मिडियाले ब्रेक गरेको समाचार जसले बतासको बदमासीलाई नङ्ग्याइदियो, निजी मिडियालाई पछि लगायो
२०७८ पुष २३ गते १९:१३ मा प्रकाशित